I-skype ye-Android ngoku iyadada kwiifowuni zakho zevidiyo kwezinye ii -apps
Eyona Iindaba Kunye Nohlolo I-Skype ye-Android ngoku iyakwazi ukuhambisa iifowuni zakho zevidiyo ngaphezu kwezinye iifayile
Oku kuyamangalisa kuqala kwi-Android esinayo apha kwaye unokumangaliswa kukuba ivela kuMicrosoft. Uhlaziyo olutsha kwi-Skype lubethe iGoogle Play Store namhlanje eyongeza into entsha emangalisayo: ividiyo yakho ye-Skype iya kukulandela kwezinye usetyenziso kwiwindows ejikelezayo. Sibonile into efanayo kwiYouTube, kodwa ibikukuhlelo lweYouTube kuphela, oku kudibanisa yonke inkqubo; kwaye, ungabukela ividiyo kwiifestile ezivelelayo kwizixhobo zeSamsung. Kodwa, eli nqaku litsha kwi-Skype liza kusebenza kuwo onke amacwecwe e-Android.
Ukuba ujonga iimvume ezintsha zenkqubo ye-Skype xa uhlaziya, uya kubona imvume entsha yokuvumela usetyenziso ukuba luzobe ngaphezulu kwezinye iiaphulelo. Inqaku nje nangona: uya kuyibona le mvume intsha kwiifowuni nangona inqaku lisetafile kuphela. Eso sisitshixo kanye apha nangona, kuba oko kuvumela ividiyo yakho ye-Skype ukuba ikulandele nokuba utshintsha ii -apps. Kwaye, ukuba ukwifowuni yeaudio, usenokutshintsha iiapps kwaye iaudiyo ikulandele njengoko uhamba.
Elinye inqaku elincinci longeziwe elikuvumela ukuba ucofe kuluhlu lwakho lwabafowunelwa ukubonisa uluhlu loonobumba bokuhamba ngokulula kwiileta ezahlukeneyo. Ngaphandle koko, kukho izilungiso ezinyanzelekileyo zegciwane kunye nokuphuculwa kokusebenza.
Uhlaziyo alukhankanyi naziphi na ezona mfuno ziphantsi zenkqubo ye-Android yeli nqaku, kodwa ekubeni zingamacwecwe kuphela, sinokucinga ukuba yi-Android 4.0 nangaphezulu, kuba phantse akukho macwecwe e-Android ashiye ukuqhuba uhlobo lwe-OS oludala kunolo.
Khuphela: I-Skype umthombo: Ibhlog ka-Skype
izixhobo ze-iphone 12 pro max
iifowuni ezisebenza kubo bonke abathwali
Ukukhupha amanani kumtya usebenzisa iiJava eziNgcaciso zaMva
Uhlaziyo luka-Apple i-iOS, i-iPadOS kunye nevidiyo yokudala ividiyo
Uyifaka njani iKhowudi kunye neKhowudi yeJSON Byte Array
Ezona zikhuseli zibalaseleyo zeglasi ye-iPhone X
I-Asus ZenPad 3S 10 yoVavanyo